ယုံကြည်မှုအုပ်စုများသည် အမုန်းပွားစေသော အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို တောင်းဆိုရန် - ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
[ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ] မြေခွေးများနှင့် ကြက်လှောင်အိမ်များ* – “အမျိုးသမီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအစီအစဉ် ပျက်ကွက်မှု” ဆိုင်ရာ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ သတင်းနှင့်အထူးများ
[ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ] အန္တရာယ်ရှိသော အာဖဂန် ပညာရှင်များအတွက် တရားမျှတပြီး ထိရောက်သော ဗီဇာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် Anthony Blinken သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ၊ လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များ
[ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ] New Issue of In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း
[ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ] နူကလီးယား ဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုအဖြစ် လူ့ဘဝအကြောင်း ငါသိသောအရာ သဘော
[ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ] အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ တွင် EU နှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့၏ ပူးတွဲကြေညာချက် (ဇွန် ၁၉)၊ သတင်းနှင့်အထူးများ
အမုန်းပွားစေသော အကြမ်းဖက်မှုများကို အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုပြုလုပ်ရန် ယုံကြည်ရေးအဖွဲ့များက လောကကျင့်ဝတ်များကို ဖိတ်ခေါ်သည်
မေလ 19, 2022 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ဓာတ်ပုံ ကောလင်းလွိုက် on Unsplash
လူဆယ်ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့သော အာဖရိကန်အမေရိကန်တစ်ဦးမှလွဲ၍ တမင်တကာ စေ့စေ့စပ်စပ် မုန်းတီးသည့် Buffalo အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အဓိကယုံကြည်မှုအခြေခံအုပ်စုနှစ်စု (အောက်တွင်တင်ထားသည်) ၏ထုတ်ပြန်ချက်များကို မြင်တွေ့ရသည်မှာ အားတက်စရာပင်ဖြစ်သည်။ ရာဇဝတ်မှု။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံသားများအနေနှင့်၊ ကျင့်ဝတ်၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော၊ လက်တွေ့ကျသော လုပ်ရပ်အတွက် အလွန်လက်တွေ့ကျသော တောင်းဆိုမှုများ၊ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံသားများအနေနှင့် “တွေးခေါ်ဆုတောင်းခြင်း” ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို အခြားသူများအား ချန်ထားခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အားလုံးသည် “ဘုရားကျောင်းနှင့် နိုင်ငံတော် ခွဲထွက်ခြင်း” နိယာမကို အပြည့်အဝ လေးစားလိုက်နာကြပြီး ထို့ကြောင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံနှင့် လောကငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး နှစ်ခုစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
နယူးယောက်မြို့၏ဘာသာပေါင်းစုံစင်တာ နှင့် Arc ကိုကွေးပါ။ဂျူးငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အခြေခံအချက်များဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးခြင်းကို နိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းဆီသို့ သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ New York ၏ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးဗဟိုဌာနသည် နိုင်ငံသားတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုများကို ဖြိုခွဲပစ်သည့် ရာဇ၀တ်မှု၏ သိသာထင်ရှားသော ရှုထောင့်နှစ်ရပ်ကို တုံ့ပြန်ရန် - လူသားများ၏ ဒုက္ခများကို သက်သာရာရစေရေးနှင့် အကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် - ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်၊ ကျူးလွန်ခံရသူအသိုင်းအဝိုင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို အမုန်းတရားအခြေခံသော လူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ကျူးလွန်ရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသော လက်နက်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို တားမြစ်ရန် ဥပဒေပြဌာန်းရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအဖွဲ့တစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပစ်မှတ်ထားကာ ကျူးလွန်သူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် ကြောက်ရွံ့စေရန် မှော်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထောက်အထားများနှင့်သုခ။ ကျူးလွန်သူအချို့နှင့် ၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများသည် တန်းတူညီမျှမှုနှင့် မထိုက်တန်သူများကို “အစားထိုး” ရန် ငြင်းဆိုကြောင်း ကြေညာသည်။
ဤအချက်များအားလုံးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၊ ဤအထူးသဖြင့် Buffalo ကိစ္စ၊ အမေရိကန်တွင်နှင့် အလားတူ သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအများအပြားတွင် အလားတူ လုပ်ရပ်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ . Buffalo စူပါမားကတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု၏ အကောင့်များစွာကို ကျောင်းသားများအား ဖတ်ရှုရန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာတတ်များအား ဖိတ်ခေါ်ပြီး အထွေထွေ ဆွေးနွေးမှုတွင် အကောင့်အမျိုးမျိုးမှ ပေးဆောင်ထားသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ပွဲ၏အခြေအမြစ်အဖြစ် အချက်အလက်များဖြင့် သင်ကြားရေးအဖွဲ့သည် Interfaith Center နှင့် Bend the Arc ပို့စ်များကို ဖတ်ရှုပြီး အောက်တွင် အဆိုပြုထားသော မေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းသည့် အုပ်စုစုံစမ်းမေးမြန်းမှုဖြင့် နောက်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
Arc ကိုကွေးပါ။ စာဖတ်သူများအား တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ “… ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်ထကြွပါ”
အဲဒါဘာကြောင့်လဲ သဘောတရား အများကိန်း၌သုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီအဖြစ် သတ်မှတ်မည့် အတွေးအခေါ်ပုံစံများ သို့မဟုတ် မူဘောင်များစွာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသလား။
စကားလုံးကို အသုံးပြုပြီး ကြေငြာချက်မှာ သင်ဘာလုပ်သလဲ၊ မှုတ်သွင်းခံ စကားလုံးထက်၊ စေ၏ ဘာကို ရည်ညွှန်းပြီး တိုက်ခိုက်မှုကို ဖြစ်စေတာလဲ။ စကားလုံးရွေးချယ်မှုသည် တာဝန်နှင့် မည်သို့သက်ဆိုင်နိုင်သနည်း။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအသေးစိတ်အစီအစဥ်တွင် သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှုမှာ ၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီတွင် တာဝန်ရှိသနည်း။ ဤနှင့်အခြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ဝဘ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တာဝန်ကွင်းဆက်တစ်ခုကို သင်ဖော်ပြနိုင်ပါသလား။ သင့်ဝဘ် (သို့) ကွင်းဆက်ရှိ ရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်များနှင့် သာမန်အများပြည်သူတို့၏ ရပ်တည်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။ ဤမုန်းတီးမှု ရာဇ၀တ်မှုများကို ပပျောက်ရန် ယခု လူတိုင်းကို အဘယ်အရာတောင်းဆိုနိုင်မည်နည်း။ တုံ့ပြန်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် “ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် နိုင်ငံရေးအင်အား” လိုအပ်နိုင်သနည်း။ ထိုသတ္တိနှင့် ခွန်အားကို မြှင့်တင်ရန် အဘယ်အရာ သင်ယူရန် လိုအပ်သနည်း။
နယူးယောက်မြို့၏ဘာသာပေါင်းစုံစင်တာ ဘုရင်ခံက အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်း ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်များကို တားမြစ်ရန် ပြည်နယ်ဥပဒေအတွက် တိုက်ရိုက်ထောက်ခံသူများ။
ဤဥပဒေသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အမုန်းပွားမှုများအား မည်ကဲ့သို့ လျော့ပါးစေမည်နည်း။ သေနတ်ပစ်ခတ်မှု သိသိသာသာ လျှော့ချရန် တားမြစ်ချက်သည် လုံလောက်သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား။ ဘယ်ဥပဒေတွေကို ထပ်လောင်းတောင်းဆိုနိုင်မလဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကူးစက်ရောဂါအချိုးအစားရှိသည့် သေနတ်များ၏ ကျယ်ပြန့်သော ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဖယ်ရှားရန် အဘယ်အရာ လိုအပ်နိုင်မည်နည်း။ လက်ထဲတွင် သေနတ်ပေါင်းများစွာ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်ဆိုးများသည် အခြားမည်သည့်ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက “အတူနေဖို့ လိုတဲ့ အခြေအနေတွေလား။” အခြေအနေ ပြောင်းလဲသင့်သည်/ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက အပြောင်းအလဲကို အောင်မြင်ရန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးတွင် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်မည်နည်း။
Bend the Arc- Jewish Action – မေလ 17 ရက်၊ 2022 ခုနှစ် သတင်းလွှာ
subject: ကျွဲ, နယူးယော့
(ကြည့်ပါ။ နယူးယောက်၊ Buffalo တွင် လူမည်းဆယ်ဦးကို လူဖြူ အကြီးစား အစွန်းရောက် လူဖြူ သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Bend the Arc ၏ ထုတ်ပြန်ချက်)
ဒီသီတင်းပတ်ကုန်မှာ Buffalo မှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန် လူမည်းဆယ်ယောက်လုံးရဲ့ အမှတ်ရစရာတွေက ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။ ပြီးတော့ ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒကို ဆန့်ကျင်ကြစို့။
ဤသီတင်းပတ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေးအကျဆုံးနှင့် တည်မြဲနေသော အမှန်တရားကို အမှတ်ရနေပါသည်။ လူဖြူ ရာထူးကြီးခြင်းသည် လူတိုင်း ဘေးကင်းပြီး ရှင်သန်နိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီ အမေရိက၏ အိပ်မက်အတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏စူပါမားကတ်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ တရားဇရပ်များ၊ ဗလီများ၊ သို့မဟုတ် ဘုရားကျောင်းများ၏တံခါးများကိုဖြတ်လျှောက်နေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘေးကင်းရန် ထိုက်တန်ပါသည်။
စနေနေ့တွင် လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီတစ်ဦးသည် လူမည်းများအား သတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Buffalo, NY သို့ ကားမောင်းလာခဲ့ရာ ဆယ်ဦးသေဆုံးပြီး အခြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေကြပြီး လူဖြူ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်၏ နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါသများ ပြည့်နှက်နေပါသည်။
ဒဏ်ရာရသူများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းနေပြီး သေဆုံးသူများအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေပါသည်- Celestine Chaney, 65; Roberta Drury, 32; Andre Mackniel, 53; Katherine Massey, 72; Margus D. Morrison, 52; Heyward Patterson, 67; Aaron W. Salter, 55; Geraldine Talley, 62; Ruth Whitfield, 86; ပုလဲပျို၊ ၇၇။
သူတို့၏အမှတ်တရများသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့၏ အမွေအနှစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးပေါင်းစုံဂျူးအသိုင်းအဝိုင်းသည် Buffalo ရှိ လူမည်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသူအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာ၊
ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ မတော်တဆမှု မဟုတ်ပါဘူး။ အစွပ်စွဲသေနတ်သမားသည် ဤရပ်ကွက်ကို ပစ်မှတ်ထားရန် နာရီပေါင်းများစွာ ကားမောင်းခဲ့ပြီး - ရရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ စည်းရုံးခဲ့သည့် Black Buffalo နေထိုင်သူများကို ရွေးချယ်ရာတွင် - လူမည်းများကို တတ်နိုင်သမျှ သတ်ပစ်ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်။1
သေနတ်သမား၏ ကြေငြာချက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် မကြာခဏဆိုသလို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် ဂျူးလူဖြူအမေရိကန်များကို အစားထိုးရန် ကြိုးပမ်းမှုများနောက်ကွယ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆိုင်ရာ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော မုသားကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။ ဤလိမ်ညာမှုသည် 2018 ခုနှစ်တွင် Pittsburgh ရှိ ဂျူးလူမျိုးများနှင့် 2019 ခုနှစ်တွင် El Paso တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ရည်ရွယ်သည့် သေနတ်သံများတွင် ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့သည်။2,3
ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူး။ "အစားထိုးခြင်း" ဟူသော အယူအဆသည် ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူဦးရေပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနေသည့်အချိန်အတွင်း လူဖြူထိတ်လန့်ပျံ့နှံ့စေရန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေသော ခေတ်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ဤလိမ်လည်မှုသည် လူဖြူအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အစွန်းအဖျားမှ လက်ယာနိုင်ငံရေးအပြောအဆို၏ ပင်မရေစီးကြောင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လက်ယာယိမ်းနိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပဏ္ဍိတအများအပြား— Fox News ၏ Tucker Carlson မှ အောက်လွှတ်တော်တွင် တတိယအဆင့်အမြင့်ဆုံး ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ် Elise Stefanik အထိ တိုးပွားလာသော အရေအတွက်သည် သန်းနှင့်ချီသော ပရိသတ်များထံ ဤလိမ်လည်မှုကို ဖြန့်ကြသည်။4,5
ယခု ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်သော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ရီပတ်ဘလီကန်မဲဆန္ဒရှင် ထက်ဝက်နီးပါးသည် “အစားထိုးမှုသီအိုရီ”—Buffalo တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် တူညီသော အယူအဆကို အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သဘောတူကြောင်း ပြသထားသည်။6
ဒါက နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါ။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူမည်းလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ အားလုံးအတွက် လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ကြီးထွားလာနေတဲ့ အချိန်မှာ၊ ဤနိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပဏ္ဍိတများသည် မည်သူ့ကိုမဆို ထိခိုက်နစ်နာစေကာမူ ၎င်းတို့၏ အာဏာကြီးထွားလာစေရန် ကွဲပြားခြင်းနှင့် အကြောက်တရားများကို ထုတ်လုပ်ရန် လူဖြူမကျေနပ်ချက်များကို လိမ်ညာပြောဆိုနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကြီးပွားတိုးတက်ရန် လိုအပ်သောအရာများကို အနိုင်ယူရန် ကွဲပြားခြားနားမှုမျဥ်းများကို ဖြတ်ကျော်၍ အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤအခိုက်အတန့်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သတ္တိနှင့် နိုင်ငံရေး အင်အားအပြည့်ဖြင့် တုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် စုစည်းထားသော ဤခြိမ်းခြောက်မှုကို ချေမှုန်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျူးအဖွဲ့အစည်းများ၏ နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးဖြစ်ရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုး၊ မည်သို့ဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အရပ်ကပင်ဖြစ်စေ လူတိုင်းလွတ်လပ်မှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ ပိုင်နိုင်စွာနေထိုင်နိုင်သည့်နိုင်ငံကို အတူတကွ တည်ဆောက်သွားပါမည်။
Bend the Arc အဖွဲ့
PS သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ Bend the Arc သည် ဤပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီကို ခြေရာခံခဲ့ပြီး ၎င်းအား ဖြန့်ကြက်ထားသော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပဏ္ဍိတများကို တာဝန်ခံရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သင်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည်များကို နားလည်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များစွာနှင့် ဗီဒီယိုများစွာကို Twitter တွင် ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားပါသည်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ပြီး မျှဝေပေးပါ။.
1. The New York Times၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြင့် ပုံဖော်ထားသည့် လူမည်းရပ်ကွက်ကို သေနတ်သမားက ပစ်မှတ်ထားသည်။
2. NPR၊ 'ကြီးမြတ်သော အစားထိုးမှု' ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းအား ကျွဲပစ်သတ်ခြင်းတရားခံနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
3. The New York Times၊ Buffalo Suspect ၏ လူမျိုးရေးခွဲခြားသော ရေးသားချက်များသည် အခြားတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်မှုများကို မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။
4. အမေဂျုံးစ်၊ The Buffalo Shooter's Manifesto သည် Tucker Carlson မှ တွန်းအားပေးသော တူညီသော လူဖြူ Supremacist ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအပေါ် အားကိုးသည် ။
5. ဝါရှင်တန်ပို့စ်၊ ကိုယ်စားလှယ် Elise Stefanik သည် Buffalo သံသယရှိသူနှင့် ပေါင်းဖက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသီအိုရီကို ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့သည်။
6. ဝါရှင်တန်ပို့စ်၊ ရီပတ်ဘလီကန်များ ထက်ဝက်နီးပါးက 'အစားထိုးမှုသီအိုရီ' ကို သဘောတူသည်
ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် အရင်းအမြစ်များ- Buffalo ရှိ လူမည်းပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး
New York ၏ Interfaith Center သည် ယခုသီတင်းပတ်ကုန်က အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူမည်းမုန်းတီးရေးတွင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ကျွဲနေထိုင်သူ ၁၀ ဦး၏ မိသားစုဝင်များအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားပါသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သည့် ဒဏ်ရာရသူ သုံးဦးအတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းချက်များသည် ၎င်းတို့၏ ဒေသဆိုင်ရာ စူပါမားကတ်တွင် ပြင်းထန်ပြီး အစွန်းရောက်သည့် လူဖြူစူပါမားကတ် ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်မီတွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ ကြီးမားနေပြီဖြစ်သော ကျယ်ပြန့်သော အသိုက်အဝန်းအတွက် ဆုတောင်းပေးပါသည်။
ဤအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပစ်ခတ်မှုသည် အခြားသူများ၏ ရှည်လျားသော ပစ်ခတ်မှုဖြစ်သည်- 2012 ခုနှစ် Oak Creek gurdwara၊ Mother Emmanuel တွင် 2015၊ 2018၊ Tree of Life တရားဇရပ်တွင်၊ 2019၊ El Paso Walmart ရှိ၊ 2019၊ Christchurch ရှိ ဗလီများ၊ 2021 အာရှပိုင် အသေးစားရှိ ဗလီများတွင် Atlanta တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားများစွာသောလုပ်ငန်းများ။ သို့သော်လည်း လူမည်းဆန့်ကျင်ရေး အဓိက သတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဤပစ်ခတ်မှုသည် အမေရိကန်တွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အကြမ်းဖက်မှု၏ ထူးခြားသောသမိုင်းတွင် ကျွန်စနစ်၊ မိသားစုခွဲထွက်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း နှင့် Jim Crow တို့ထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
Episcopal Church ၏ ဥက္ကဌ ဆရာတော်နှင့် Buffalo ၏ဇာတိဖြစ်သော၊ အများဆုံး Rev. Michael Curry က "လူသားတိုင်းရဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးမှုဟာ ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းပေမယ့် ဒီပစ်ခတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိခဲ့ပြီး ငါတို့နိုင်ငံကို သေစေလောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ လှည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာ တော်တော်ကြာနေပြီ” ဆရာတော်၏ ဟင်းချက်ချက်အပြည့်အစုံအတွက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုမှ ကင်းဝေးစေရန် ကြိုးပမ်းသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ICNY သည် ဤကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သောသေဆုံးမှုနှင့် ပြိုကွဲပျက်စီးမှုများကို ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းအတွက် နိုင်ငံတော်၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပိုမိုကြီးမားသောအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းထက် ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုချက်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
VoiceBuffalo သည် Buffalo တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အစားအသောက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အနှီးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ။ ၎င်းတို့ကို Facebook တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ ဒီမှာ။
အလားတူ၊ Buffalo ၏ မူဆလင်လူထုမူဝါဒကောင်စီသည် သေဆုံးသူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများနှင့် ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Jami Masjid မှတဆင့် မူဆလင်အသိုက်အဝန်းတွင် ရှိသည်။ ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်ခဲ့သည်။ "ထိပ်တန်းစျေးကွက်ပစ်ခတ်ခံရသူများ" အတွက် သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုများကို ထောက်ပံ့ရန်။ ရရှိသည့်ငွေသည် အသုဘစရိတ်နှင့် ဆေးဖိုးများ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။ လင့်ခ်က ဒီမှာပါ။
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kathy Hochul သည် တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်အချို့အပေါ် ပြည်နယ်၏ လက်ရှိတားမြစ်ချက်ကို တိုးချဲ့သည့် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို အဆိုတင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဆိုပြုချက်တွင် ဖုံးကွယ်ထားသော လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ပယ်ချနိုင်သည့် အမေရိကန် တရားရုံးချုပ်က မျှော်လင့်ထားသည့် စီရင်ချက်ကို ဖြေရှင်းရန် နယူးယောက်၏ ဥပဒေများတွင် အပြောင်းအလဲများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အမြင်တွေကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အသိပေးပါ။ ဤအဆိုပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ New York State Council of Churches သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
ဗျာ ဒေါက်တာ Chloe Breyer
ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ပြီး #SpreadPeaceEd ကိုကူညီပါ။
နိုင်ငံ * တိုင်းပြည် *အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘရာဇီးဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာခရိုအေးရှားကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တီမောအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစုဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂိုင်ယာနာgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဗြိတိသျှဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါဂွာတီမာလာဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်ဣသရလေအီတလီအိုင်ဗရီကို့စ် (Cote D'Ivoire)ဂျမေကာဂျပန်ယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ် (ပြင်သစ်)Mauritaniaမောရစ်ရှမက္ကစီကိုMicronesiaမျောဒေးဗီးမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ကိုရီးယားေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်း (သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများ)ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္ပိုလန်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်)ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါအက်စ်ဂျော်ဂျီယာ & အက်စ် Sandwich ကကျွန်း။စိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ် & Nevis Anguillaစိန့်လူစီယာစိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့် Tome နှင့် Principeစိန့်ဗင်းဆင့် & Grenadinesဆာမိုအာဆန်မာရီနိုဆော်ဒီအာရေဗျsenegalseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံစလိုဗကျသမ္မတနိုင်ငံဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကေတာင္ကုိးရီးယားစပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်ဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားTadjikistanထိုင်ဝမ်တန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ယူဂိုဆလားဗီးယားဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အား အီးမေးလ်များ ပေးပို့ပါ- သူတို့ဖြစ်သကဲ့သို့ရေးသားချက်များ အပတ်စဉ် Digest
သင်၏စာရင်းပေးသွင်းအတည်ပြုရန်သင့်စာပုံးသို့မဟုတ် spam များကို folder ကိုစစ်ဆေးပါ။
အထူးကမ္ဘာမြေနေ့သည် အမျိုးသမီးဝါဒီအမြင်မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ပမာဏအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတက္ကသိုလ်က ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး လက်ထောက်ပါမောက္ခ ခေါ်ယူနေပါတယ်။
UMass Boston သည်မြို့ပြကျောင်းများတွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်လူမျိုးရေးဆန့်ကျင်ရေးခေါင်းဆောင်မှုအထူးပြုလက်ထောက်ပါမောက္ခကိုရှာဖွေသည်
အောက်တိုဘာလ 28, 2020 ဂျော့ဘ် 0
မက်ဆာချူးဆက်ရှိဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှပညာရေးနှင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောလိပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ကိုစတင်ရန်ပညာရေး ဦး စီးဌာနရှိမြို့ပြပညာရေး၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပေါ်လစီလေ့လာမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခအတွက်လျှောက်လွှာများကိုဖိတ်ကြားသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အမေရိကန်လူဖြူများအတွက်လူမျိုးရေးနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကိုသင်ကြားရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း - ဖာဂူဆန်မှ Charleston အထိ
သြဂုတ်လ 14, 2017 CV 1
လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုအတွက်အလုပ်လုပ်သောအမေရိကန်လူဖြူများနှင့်အတူရှုပ်ထွေးမှုများမှာသံသယရှိစရာမလိုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုများအတွက်လှုပ်ရှားမှုပါဝင်ပတ်သက်ရဖို့ White ကအမေရိကန်တွေပိုလိုအပ်သည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပါ ၀ င်လာအောင်၊ Jon Greenberg သည်အမေရိကန်လူဖြူများကိုကူညီရန်ဤစာရင်းကိုပြုစုခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အစွန်းရောက်ပါ ၀ င်မှုအားလက်ခံခြင်း၊ ကြားဖြတ် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုဖန်တီးရန်လက်တွေ့ခြေလှမ်းများ
သြဂုတ်လ 22, 2020 CV 1
အခြေခံကျကျအားလုံးပါ ၀ င်စေရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာပဏာမခြေလှမ်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နိုင်ငံရေးအမြင်လည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာသင်ခန်းများ (ပကတိသို့မဟုတ်ဥပစာစကား၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်) ကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသေးငယ်သောပုံစံဖြင့်ပုံဖော်ရန်အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]